Maalinka la xasuusto dadka ku dhintay shilalka oo dalka looga dabaaldegay – The Voice of Northeastern Kenya
Maalinka la xasuusto dadka ku dhintay shilalka oo dalka looga dabaaldegay
Star FM November 18, 2018
Waxaa maanta degmada Sachangwan ee ismaamulka Nakuru lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegayay maalinka adduunka ee la xasuusto dadka ay shilalka kala duwan nooloshoodu galaafteen.
Xuska maalinkan ayaa guud ahaan dunida lagu qabtaa sannad kasta taarikhdu marka ay tahay 18-ka Novembar oo maanta ku beegan.
Agaasimaha maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka wadooyinka ee NTSA Mr. Francis Meja oo xafladaasi hadal kooban ka jeediyay ayaa yidhi
Xuska maalinkan ayaa waxaa sannadii 1993-dii bilowday hay’adda samafal oo caawin jirtay dhibaanayaasha shilalka ku waxyeeloobay ee Ingiriiska waxaana 2005-kii ansaxiyay golaha guud ee qaramada midoobay
Dhanka kale ugu yaraan 11,231 qof oo Kenyaan ah oo lagu eedeyay inaysan ilaalin shuruucda gaadiidka ayay laamaha ammaanka xabsiyada u taxabeen tan iyo isniintii.
12-kii bishan ayay ahayd markii guud ahaan wadanka ay ka dhaqangashay shuruuc uu soo saaray wasiirkii hore ee gaadiidka Mr. John Michuki.
Toddobaadkii la soo dhaafay waxaa magaalada Nairobi lagu xiray 1,200 oo qof 5,600 waxaa laga qabqabtay degaanada kala duwan ee gobolka bartamaha dalka 2,389 waxaa lagu xiray Nyanza halka galbeedka wadanka laga soo xirxiray 2,402 .
Dembiyada ugu badan ee keenay in eedeysanayaasha maxkamad la geeyo ayaa kala h suumanka ku dheggan baabuurta oo aysan xiran, dadka socda hareeraha wadooyinka oo goob aanan munaasab ahayn uga gudba , baabuurta qaar oo lagu kaxeeyo xawaara ka badan midkii loogu talagalay , gaariga oo mid kale lagu hor gooyo, baabuur aanan taya ahaan wanaagsanayn oo la wado iyo rakaabka oo cadaadis lagu saaro inay baabuur gaar ah raacaan.
Waxaa lacago kala duwan oo ganaax ah la saaray rakaab, wadayaasha baabuurta iyo sido kale mootooyinka ama dhugdhugleyda.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Matiangi, dhigiisa gaadiidka Mr. James Macharia iyo agaasimaha maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka wadooyinka ee NTSA , Mr.Francis Meja ayaa dhammaantood carrabka ku dhuftay in howlgalada ay sii soconayaan ilaa iyo inta xal kama dambeys ah looga helayo shilalka wadooyinka ee laga soo tabiyo qeybaha kala duwan ee dalka.
← wareysi xiisa badan oo aan la yeelanay nin makarafoon dadka ugu yeera baska ay raacayaan
In ka badan 200 oo gabdhood oo laga soo badbaadiyay guurka xili hore →